Wine and Personality 1 – Cellar Door Distribution
home / wine knowledge / Wine and Personality 1
လူတစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် ဝိုင်ကြိုက်နှစ်သက်ပုံခြင်းက မတူညီပါဘူး။ ဝိုင်သောက်တဲ့ စတိုင်လ်ကလည်း မတူပါဘူး။
ဒီနေ့မှာတော့ သင်ကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ ဝိုင်စပျစ်အမျိုးအစားလိုက် သင့်ရဲ့ Personality ကို ပြောပြပေးလိုက်ပါတယ်။
Cabernet Sauvignon ဝိုင်အမျိုးအစားကို ကြိုက်နှစ်သက်သူတစ်ဦးဆိုရင်တော့ သင်က
ယောင်္ကျား ပီသသူတစ်ဦးဖြစ်ပြီး အမြဲတက်ကြွလန်းဆန်း နေသူတစ်ဦးပါ။ အသံဩဇာအာဏာ ရှိသူလည်းဖြစ်ပါတယ်။
နောက်တစ်ချက်ကတော့ အသက်ကြီးလာလေ ပိုပြီး ကြည့်ကောင်းလာလေဆိုတဲ့ အမျိုးသားထဲမှာ သင်ပါဝင်ပါတယ်။
Merlot ဝိုင်အမျိုးအစားကို ကြိုက်နှစ်သက်သူတွေကတော့ Merlot ရဲ့ဆောင်ပုဒ် “Easy to Drink” ဆိုသလိုပါပဲ။
သူငယ်ချင်းအပေါင်းအသင်းတွေနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ မိတ်ဆုံစားပွဲတွေမှာပဲ ဖြစ်ဖြစ် သင်ပါရင် ပိုပြီးပျော်စရာကောင်းပါတယ်။ သင်က ပျော်ပျော်နေတက်ပြီး ခင်ဖို့ကောင်းတဲ့သူထဲမှာ ပါဝင်ပါတယ်။ ပြောရမယ်ဆိုရင် သင်က ဘယ်လိုအခြေအနေမှာပဲ ဖြစ်ဖြစ် အဆင်ပြေအောင်နေတက်သူပါ။
✅ White Zinfandel
White Zinfandel က Alcohol Percentage မြင့်မားတဲ့ဝိုင်အမျိုးအစားပါ။
ဒီလိုဝိုင်အမျိုးအစားကို ကြိုက်နှစ်သက်သူကတော့ စွန့်စားမှုတွေ စိန်ခေါ်မှုတွေကို ကြိုက်နှစ်သက်သူဖြစ်ပါတယ်။ သင်က လောကဓံကို ခံနိုင်ရည်ရှိသူတစ်ဦးလည်းဖြစ်ပါတယ်။
✅ Pinot Noir
Pinot Noir ဝိုင်အမျိုးအစားကို ကြိုက်နှစ်သက်သူတစ်ဦးဆိုရင်တော့ သင်က Disney Princess လေးတစ်ဦးဖြစ်တဲ့ Snow White လေးလိုပါပဲ။
အမြဲ တက်ကြွလန်းဆန်ပြီး မြူးမြူးကြွကြွလေးနေတက်သူပါ။ ကျက်သရေရှိတဲ့ အလှအပကို ပိုင်ဆိုင်ထားသူတစ်ဦးလည်းဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ပြီး သင့်ရဲ့အပြုအမူ အပြောအဆိုလေးတွေက ချစ်စရာကောင်းနေတတ်ပါတယ်။
Shiraz ဝိုင်အမျိုးအစားကို ကြိုက်နှစ်သက်သူတွေကတော့ ဘဝမှာ လွတ်လွတ်လပ်လပ်နေရတာ ကြိုက်နှစ်သက်သူတွေပါ။ ဘယ်အရာကို မဆို ကြိုးကြိုးစားစားနဲ့ လုပ်လေ့ရှိတဲ့သူတွေဖြစ်ပြီးတော့ ခရီးသွားလာရတာ နှစ်သက်သူဖြစ်ပါတယ်။
ဘာသာမတူ၊ လူမျိုးမတူတဲ့ သူတွေကိုလည်း ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရတာ ကြိုက်နှစ်သက်ပြီး သူတို့နဲ့ အတူတူ သွားလာရတာကို သဘောကျသူတစ်ဦးပါ။
အခုပြောပြပေးလိုက်တဲ့ အချက်လေးတွေက ဝိုင်စပျစ်အမျိုးအစားတွေအလိုက် သင့်ရဲ့ Personality ကို ချုံငုံပြောပြထားတာပါ။
နောက်ရက်မှာတော့ ကျန်နေသေးတဲ့ ဝိုင်စပျစ်အမျိုးအစားတွေအလိုက် ဝိုင်ချစ်သူတို့ရဲ့ Personality ကိုပြောပြပေးသွားဦးမှာဖြစ်လို့ စောင့်မျှော်ဖတ်ရှုပေးဖို့ မမေ့နဲ့ဦးနော်။
(ဒီစာကိုတော့ Elite Daily Website မှ ဘာသာပြန်ဆိုပေးထားပါတယ်)
What Your Wine Choice Says About Your Personality..
Here is the some tips of your personality depends on your choice of wine grapes.
✅ Merlot is often referred to as “easy to drink,” just like you; you’re easy to get along with. Whether in big groups or intimate gatherings, you’re alwaysadelightful partner for table conversation.
Here areafew basic facts about wines and personality. The next day, we will tell you the personality of the wine lovers according to the remaining types of wine grapes. Stay tuned!
(Credit to Elite Daily Website).